नियुक्तिमा भाँडभैलो : गीतडाब्लिङ स्कूलमा व्यापक भ्रष्टाचार छ, मलाई शोषण गरियो- विनिता छेत्री - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारनियुक्तिमा भाँडभैलो : गीतडाब्लिङ स्कूलमा व्यापक भ्रष्टाचार छ, मलाई शोषण गरियो- विनिता छेत्री
शिक्षक नियुक्ति/ विद्यालयमा धाँधली-1
शिक्षक नियुक्तिको सूची गोजमुमो प्रवक्ता बीपी बजगाईँले सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न ठाउँबाट चरम असन्तुष्टि र धाँधलीप्रति रोष देखापऱ्यो। दार्जीलिङ क्रोनिकल्स र खबरम्यागजिनले ती असन्तुष्टी र धाँधलीको चुरोमा पुग्न एउटा प्रयास गऱ्यो। धेरैले हामीलाई सूचनाहरू उपलब्ध गराए। स्पष्ट देखापऱ्यो, नियुक्तिमा व्यापक भाँडभैलो छ।
खासगरी दुइथरी समस्या देखा परे, पहिलो-विनय तामाङ खेमाले आफ्ना नेता, नेताका स्वास्नी, आफन्त र पार्टीका क्याडरहरूलाई सूचीमा हालिएको देखियो। अर्को, धेरैवर्षदेखि भोलेन्टियर गर्दै आइरहेकाहरूलाई महत्व नदिएर स्कूल म्यानेजिङ कमिटीका सदस्य र स्कूल प्रवन्धनले आफ्नो मनोपोली गर्दै कहिल्यै स्कूलमा देखा नपर्नेहरूको नाम सूचीमा हालेको भेटियो।
दुवै थरीले नियुक्ति प्रक्रियालाई पत्तो नदिएर आफ्नै नियुक्ति प्रक्रिया लागू गरेको देखियो।
पहाडमा नियुक्तिलाई लिएर राजनीति गर्ने पुरानो परम्परा हो। सुबास घिसिङ र विमल गुरुङले यो परम्परा बसाए। स्कूलमासमेत राजनीति हुल्ने र भोलेन्टियर शिक्षकको लागि पार्टीले सिफारिस् गर्ने यो जुन परम्परा छ, यसले शिक्षालाई कहीं पनि लाँदैन।
यसै पनि प्राथमिक पाठशालाहरूमा शिक्षक धेर विद्यार्थी कम छन्। शिक्षाको गुणस्तर काम लाग्दो छैन। हाइस्कुलकोसमेत गुणस्तर झरेर भुइँमा पुगेको छ। यस्तो गतिमा नियुक्ति प्रक्रिया बन्दै गयो र यही प्रक्रिया स्थायी बन्यो भने पहाडका सरकारी शिक्षणसंस्थान शीघ्र नै पङ्गु बन्ने स्पष्ट छ।
अब यो परम्परा बन्द गरिनुपर्छ। ‘जेन्युन’-लाई नियुक्ति दिइनुपर्छ। नियुक्ति प्रक्रियालाई सच्याउँदै प्रभावकारी शिक्षानीति बनाइनुपर्छ। यो काम कसले गर्ने त?
जवाब छ, जिटिएले।
यसै पनि नयाँ सोच, नयाँ विचार भन्दै आएको विनय खेमाले पनि त्यही परम्परा दोहोऱ्याउने त? हजारौं ठाउँमा हजारौं आरोपको र गालीको भारी बोकिरहेको विनय खेमा जिटिएको टाउकोले फेरि त्यही परम्परा स्थापित गर्ने त?
अब यो परम्परा हटाउने राजनीति गरिनुपर्छ। र नयाँ सोच र नयाँ विचारको बाटो हिँड्नुपर्छ। त्यसको थालनी यही नियुक्तिबाट शुरु गरिनुपर्छ।
तर, परम्पराको थालनी किन अन्यायबाट शुरु गरिरहेको छ त?
नियुक्तिमा पनि दार्जीलिङ जिल्लालाई काख र कालेबुङ जिल्लालाई पाखा गर्ने जिटिएमा अहिले अनित थापा छन्। विनय तामाङले गरेको भूल उनले सच्याउने हुन् कि त्यही भूलको नयाँ इतिहास कायम गर्ने हुन्?
यद्धपि, नियुक्ति प्रक्रियालाई आफ्नो स्वार्थ र दलको फाइदाको लागि प्रयोग गरिने हो भने अनित थापाकालीन जिटिएको इतिहास पनि उस्तै चिलिम देखिने निश्चित छ।
जिटिएले बुझ्नुपर्छ, जति पनि भोलेन्टियरहरू छन्, उनीहरूलाई व्यवस्थापन नगरी नियुक्ति प्रक्रिया सच्चिँदैन। यसै पनि 2010 देखि विना पद कसैलाई भोलेन्टियर नियुक्ति गर्न नपाउने नोटिफिकेसन जारी भइसकेको हो। यसबारे जिटिएलाई राम्रै गरी थाहा छ। हरेक स्कूलको म्यानेजिङ कमिटीलाई थाहा छ। हेडमास्टरहरूलाई पनि थाहा छ। यसको अर्थ हो, अहिले जति पनि भोलेन्टियर छन् त्यो स्कूलमा पद रहेकैले नियुक्त गरिएका हुन्।
यसपालिको नियुक्तिबाट भाइभतिजावाद, राजनैतिक दलको मनोपोली, पार्टीको मान्छे हाल्ने प्रथाको अन्त्य गरेर योग्यहरूलाई नियुक्ति प्रक्रियाअनुसार नियुक्ति दिइनुपर्छ। यसको निम्ति सबैले आवाज उठाउन र खुलेर अघि आउन अनिवार्य छ।
गीत डाब्लिङ हाइस्कूलमा भ्रष्टाचार र भोलेन्टियरमाथि शोषणको खुलासा
खोजखबरले विनय खेमाका नेता रुदेन लेप्चासित एउटा अन्तर्वार्ता गरेको थियो। त्यतिखेर बीपी बजगाईँले विनय तामाङहरूले तयार पारेको नियुक्ति सूची भर्खर सार्वजनिक गरेका थिए। यसैबारे टिप्पणी गर्दै रुदेन लेप्चाले भनेका थिए, ‘यो मुद्दा न्यायालयमा नै पुग्यो भने पनि मुद्दामा दम छैन। किन भने भर्खरै गीत डाब्लिङमा पनि यस्तै घटना भएको थियो। मुद्दा न्यायालय लाने हारे। यसकारण यो मुद्दा प्रभावकारी छैन। राजनैतिक आरोप मात्र हो।’
त्यसैको केही दिनपछि गीतडाब्लिङका सोही मुद्दा खेपिरहेकी विनिता छेत्रीले खबरम्यागजिनसित सम्पर्क गरिन्। अनि आफ्नो पीडा सुनाइन्। खबरम्यागजिनले विनितासित भेटघाट गऱ्यो र उनको पीडाको जरा खोतल्ने कोशिश गऱ्यो। जुन यहाँ जस्ताको त्यस्तै राखेका छौं-
‘ममाथि बारम्बार शोषण भयो’
गीतड्बालिङ हाइस्कूलमा मैले 2015 देखि पढाएकी हुँ। हेडमास्टर छुतेनडुप लेप्चाले आग्रह गर्नु भएको थियो। मैले दुइवर्ष इकोनोमिक्स पढाएँ। साथसाथै एमए गर्दै थिएँ। जब नियुक्तिको कुरा चल्न थाल्यो हेडमास्टरले भन्नु भयो, ‘अहिले तिम्रो शैक्षिक योग्यता पुग्दैन। नन टिचिङस्टाफमा तिम्रो नाम हालिदिन्छु।’
मैले मानें। नन टिचिङमा पनि मेरो नाम हालेनन्। जब मैले प्रश्न उठाएँ, ‘मलाई अबोप्रान्त स्कूल नआउनु’ भन्नुभयो। मेरो श्रम शोषण त भयो नै मानसिकरूपमा पनि मलाई अत्याचार गरियो।
उनले मलाई 2018 देखि स्कलू नआउने आदेश दिनु भयो। मैले स्कूलबाट निस्किनुपर्ने भयो। नियुक्ति सूचीमा मेरो नाम नआउँदा प्रश्न गरेकी थिएँ, त्यसको जवाब उनले मलाई स्कूलबाट निकालेर दिनु भयो।
मलाई स्कूलबाट निकाल्नुको कारण आवाज उठाउँछ भनेर नै हो। किन भने 2016 मा आएकाहरूको नाम उनले सूचीमा हाल्न सिफारिस गरेका छन्। कति पुराना शिक्षकहरूको नाम पनि आयो। तर मेरो नाम हालिएन।
शिक्षकमा हालेनन्, ननटिचिङमा हाल्न सकिन्थ्यो तर त्यसमा पनि हालेनन्। स्कूलमा पोष्ट क्रिएट गर्न सकिन्थ्यो। त्यो पनि गरेनन्।
मैले स्कूलमा दुःख हुँदादेखि पढाएका हुँ। मलाई पछिबाट नियुक्ति दिने भनेरै मैले पढाउन थालेकी हुँ। 2010 देखि नै कुनै पनि स्कूलमा पोष्ट छ भने मात्र भोलेन्टियर हाल्ने ऐन पनि छ। मलाई नियुक्ति दिने भनेरै स्कूलमा हालिएको पनि हो।
तर हेडमास्टरले मलाई दिइएको कुनै पनि आश्वासन पूरा नगरेपछि मैले विनय तामाङ, अमरसिंह राई, डीआई, डिएम, ग्राम पञ्चायत, बिडियो, एसपी, हिल खासमहल वेलफेयर एसोसिएसन सबैसित कुरा राखें। कसैले सुनेनन्। किन भने मलाई उनीहरू सबैले विमल गुटको समर्थक मान्छन्। त्यसैले राजनीतिकरूपले पनि भिक्टिमाइज गर्ने काम भयो।
मेरो समस्यालाई तर हिलखासमहल वेलफेयर एसोसिएसनले बोकिदियो। मलाई परेको बज्र र अन्यायको विरुद्ध एसोसिएसनले उच्चन्यायालयमा पीआईएल पनि गऱ्यो।
न्यायालयले संस्थाले मेरो एकजनाको निम्ति पीआईएल गर्न नसक्ने अनि पीडित आफैले भने गर्न सक्ने भनेर मुद्दा ढिसमिस गरिदियो। यो संस्थाले गरेको पीआईएल ढिसमिस भएको हो, मैले मेरो अधिकारको लागि मुद्दा लगाउन पाउँछु र सक्छु।
मलाई राजनैतिकरूपले भेदभाव गरियो। संस्थाले जब उच्च न्यायालयमा मुद्दा हाले हेडमास्टरले ‘विनिता स्कूलको स्टाफ नै थिइन’ भने।
हेडमास्टरले आरटीआईको जवाबमा दिएको झुटो जवाब
मेरो दाजु कर्णबहादुर छेत्रीले हेडमास्टरलाई आरटीआई गरेर विनिताबारे जानकारी माग्दा आरटीआईको जवाबमा नै ‘विनिता स्कूलको स्टाफ नै थिइन’ भनेर जवाब दिए।
जवाबमा हेडमास्टरले नकली एटेन्डेन्स रेजिस्टर बनाएर आरटीआईको जवाब दिएका छन्। जब कि मसित सक्कली एटेन्डेन्स रेजिस्टरको कपी छ। जो, मैले पहिले नै मोबाइलमा खिचेर राखेकी थिएँ।
मेरो फोटो स्कूलको म्यागजिनमा पनि छ। रेजिस्टरमा पनि छ। जब कि जिटिए शिक्षा प्रभारी अमरसिंह राईले मेरो नाम सप्लिमेन्ट्री सूचीमा म गीतडाब्लिङमा पढाउँदैछु भनेर नै हालिसकेका छन्, तर हेडमास्टरले मात्र मेरो नाम सिफारिस गरेनन्। यो मैले भ्रष्टाचारको कुरा उठानु, नाम सिफारिसको लागि प्रश्न गर्नुको नतिजा हो।
यसैबीच मैले हिल खासमहल सोसियल वेलफेयर सोसाइटीलाई स्कूलमा भइरहेको भ्रष्टाचारबारे लिखित जानकारी दिएँ। यी सबै कुरालाई समेटेर मुद्दा हालियो।
खासमा मलाई हेडमास्टरले पाँच लाख रुपियाँ मागेर नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गरदिन्छु भनेका थिए। मैले दिन दिन सकिनँ। त्यसो हुँदा अरूकै नाम पठाइयो, मेरो छोडियो। त्यसपछि मैले भोलेन्टियरको जोइनिङ लेटर मागें, त्यो पनि मलाई दिइएन। मैले जोइनिङ लेटर मागेकै निहुमा मलाई चारवर्षपछि स्कूलबाट निकालियो।
मैले सोसाइटीलाई स्कूलमा भएको भ्रष्टाचारको लिखित जानकारी दिएको थिएँ। जसमा सरकारी नियम अनुसार 252 रुपियाँ उठाउनुपर्ने फि 19 सय उठाइएको छ। 2010 मा दागोपापले पद विना भोलेन्टियर राख्न नपाउने नोटिफिकेसन उल्ङ्घन, अरू चारजना स्टाफको भोलेन्टियर जोइनिङ डेट पछि सारेर (जस्तो कि उनीहरू 2016 सम्म अरू स्कूलमा कार्यरत थिए तर हेडमास्टरले 2013 देखि नै गीतडाब्लिङ स्कूलमा पढाइरहेको झुटो रिपोर्ट बनाएर) विभागलाई बुझाएको, हेडमास्टरले सर्टिफिकेट बेचविखन गरेको, मैले काम गर्दै गर्दा स्कूलमा 10 देखि 12 महिनासम्म स्कूलका विद्यार्थीहरूलाई मिडडे मिल नै नदिएको ( मेरो दिदी विमला छेत्रीले मिडडे मिलमाथि हेडमास्टरलाई आरटीआई गरेर जानकारी माग्दा सरकारी नियम अनुसार मिडडे मिल दिइँदैछ भनेर झुटो जवाबसमेत दिएका छन्, जसको कागज मसित छ), एकै शिक्षकलाई डबल डेपुटेसनमा राखेको, डेपुटेसनमा ओबिसीको कोटा हुँदाहुँदै ननओविसीलाईलाई हालिएको, स्कूलमा एमटीए नबनाइएको कुराहरू छन्। विभागलाई भोलेन्टियरहरूको नाम पठाउँदा केवल हेडमास्टरले मात्र सिफारिस गरेको हस्ताक्षर छ, म्यानेजिङ कमिटीको सदस्यको नरहेको, यही धाँधली गर्न सहज बनाउन पच्चिसवर्षसम्म एकै व्यक्तिलाई एमसीमा राखिएको कुराहरू उल्लेख छन्।
हेडमास्टरले बनाएको नक्कली एटेन्डेन्स रेजिस्टर
यहाँसम्म कि हाम्रो मुद्दा न्यायलयमा ढिसमिस हुने वित्तिकै हेडमास्टरले गार्जेन मिटिङ बोलाएर आफ्नो9लाख रुपियाँ खर्च भएको भन्दै हरेक विद्यार्थीबाट 300 रुपियाँ अनि हरेक स्टाफबाट 20 देखि 30 हजार रुपियाँसमेत उठाएका छन्।
न्यायालयले मैले मुद्दा लड्न सक्ने सुनवाइमा भनेकी छन्। जिटिएले मलाई न्याय दिएन भने म न्यायालय जानेछु। हेडमास्टरले विभिन्न वहाना गरेर मलाई पन्छाउने काम गरेका छन्। चारपल्ट मेरै लागि बैठकहरू भए, तर ती सबैमा मलाई आश्वासन मात्र दिए तर मलाई नियुक्ति दिन मेरो नाम सिफारिस् गरेनन्।
विनिताले सार्वजनिक गरेको सक्कली एटेन्डेन्स रेजिस्टर
मैले काम पाउनु नपाउनु त्यो अर्को कुरा हो, तर एक स्कूलका हेडमास्टरले मलाई विभिन्न आश्वासन दिएर अन्तमा स्कूलबाटै बेदखल गर्नु मप्रतिको शोषण हो। मलाई मानसिकरूपमा प्रताडना गर्नु हो। नारीप्रति अत्याचार गर्नु हो। त्यसैमाथि स्कूलमा विभिन्न भ्रष्टाचारहरू छन्। जो स्वस्थ समाजको लागि राम्रो होइन। यसैले मैले यी सबै कुरा मिडियामा राख्न चाहेकी हुँ।
स्कूल म्यागजिनमा विनिता
अहिले नियुक्तिबारे जुन खुलासा भएको छ, जेन्युनले पाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। क्राइटेरियाले भेट्नेलाई दिइनुपर्ने कुरा उठिरहेको छ। मलाई किन अन्याय गरियो, त्यो मलाई थाहा छैन। गीतडाब्लिङ स्कूलका हेडमास्टर छोटेनडुप लेप्चासित सम्बन्धित विभाग, मिडिया र सचेत जनताले प्रश्न गरिदिने म अनुरोध गर्छु। म भ्रष्टचारीहरूलाई कानूनी कार्वाही होस् भन्ने चाहन्छु।
यो थियो विनिताको वयान। विनिताको कुरा सुनेपछि खबरम्यागजिनले हेडमास्टर छुतेनडुप लेप्चासित सम्पर्क गऱ्यो। उनले विनिताका वयानहरू झुटो रहेको र शैक्षिक योग्यता नपुगेकैले उनको नाम सूचीमा नपठाइएको बताएका छन्। अरू कुरा भेटेरै बताउने भन्दै पन्सिएका छन्।
(विभिन्न ठाउँमा जेन्युनहरू शोषणमा परेका छन्। सबैको क्रमैले पीडा खबरम्यागजिनले सार्वजनिक गर्दै जानेछ। कसैको छुटेमा तथ्यसहित सम्पर्क गर्नुहोला-वाट्सएप-9851280145)